Selunqunyiwe olokuqondiswa izigwegwe kukaHelen Zille yiDA | News24
Selunqunyiwe olokuqondiswa izigwegwe kukaHelen Zille yiDA
Cape Town – Lowo owayengumholi weDemocratic Alliance (DA) uHelen Zille kulindeleke ukuba avele ngaphambi kwekomiti lezokuqondiswa kwezigwegwe le qembu ngoLwesihlanu ngenxa yemibhalo yakhe yakuTwitter ngenqubo yengcindezelo.
Lokhu kuqinisekiswe ngoMsombuluko u-Advocate Glynnis Breytenbach, onguSihlalo weFederal Legal Commission kuDA, nothe kuzobe “kuwukuvela kokuqala”.
UZille ubekwe icala lokufaka iDA ehlazweni, kanye nelokulimaza iqembu, ngemibhalo yakhe yakuTwitter yangomhlaka-16 kuMashi nalapho avikela khona inqubo yengcindezelo.
Umholi weqembu, uMmusi Maimane, umemezele ukuthi uZille usemisiwe kuDA ngenxa yalokho. Kodwa usazoqhubeka nokuba nguNdunankulu waseWestern Cape.
Kungakapheli nesikhathi esingakanani kumenyezelwe ukumiswa kwakhe, uZille uziphendulele eqenjini, wagxeka isigungu salo esiphezulu ngokungahambisani nemithetho yeqembu.
Esitatimendeni asikhiphe kuTwitter, uthe kunokushayisana phakathi kwencwandi ayinikwe oyiFederal Executive Chair, uJames Selfe, kanye nesimemezelo esenziwe uMaimane.
Uthe lokhu kumiswa kwakhe akuhambisani nomthetho uSection 3.6.3 waleli qembu, odinga ukuthi anikwe isikhathi sokuziphendulela ezinsolweni.
Kodwa-ke leli qembu kubukeka sengathi libuye lashaya ungqimphothwe ngesikhathi selikhipha isitatimende esithi isigungu esiphezulu seqembu sesibhalele uZille incwadi simazisa ngezinhloso zokummisa okwesikhashana ezinhlelweni zeqembu, kuze kuba kuphothulwa ukuqondiswa kwakhe izigwegwe.
USelfe ukuqinisekisile ngoMsombuluko ukuthi azikho izethulo abebesazitholile ezivela kuZille.
UMaimane uthi wacela uZille ukuthi axolise ngokungakhathali kwiNingizimu Afrika kanye nakuDA ngomonakalo asewudalile, kodwa “ngebhadi wanqaba”.
Kodwa-ke uZille uziphendulele ngokuthi waxolisa, wathi into yena angazange avume ukuyenza ukuvuma icala lokungaziphathi kahle ngento angayenzanga.
UZille uphinde washaya phansi ngonyawo, wathi yena angeke aze asatshiswe ukuze asule noma azibeke icala.